मेची भन्सार कार्यालय : लक्ष्यभन्दा ८% बढी राजस्व संकलन
साउन ७, झापा । मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा करीब आठ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा रू. १२ अर्ब नौ करोड राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सो अवधिमा कार्यालयले रू. १३ अर्ब तीन करोड राजस्व संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ७ दशमलव ७७ प्रतिशत बढी हो ।
कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुव विश्वकर्माले यो नाकाबाट सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको बताए । गत आर्थिक वर्षमा यो नाकाबाट संकलन भएको राजस्वमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा ४८ प्रतिशत रहेको छ ।
कोभिड–१९ को जोखिममा समेत औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न र तरकारीलगायत सामग्री आयात भइरहेका कारण राजस्व वृद्धि भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लक्ष्यको ७३ प्रतिशत अर्थात् रू. आठ अर्ब ३५ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट रू. १३ अर्ब ६५ करोडको सामान निर्यात भएको छ । निर्यात हुने वस्तुमा सबैभन्दा बढी अलैंँची रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यो नाकाबाट रू. छ अर्ब ९० लाख मूल्य बराबरको ८५ लाख ६६ केजी अलैँची निर्यात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रू. चार अर्ब आठ लाख मूल्य बराबरको ५९ लाख ९० केजी अलैँची निर्यात भएको थियो ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत विश्वकर्माका अनुसार अलैंँचीपछि सबैभन्दा बढी चिया निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रू. तीन अर्ब ३१ लाख मूल्य बराबरको एक करोड १२ लाख ६७ हजार केजी चिया निर्यात भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । रासस